Global Voices teny Malagasy » Sokitry ny “Tank Man” abontsina hita ao Taiwan alohan’ny fahatsiarovana ny fandripahana tao Tiananmen · Global Voices teny Malagasy » Print
Voadika ny 29 Mey 2019 15:46 GMT 1	 · Mpanoratra Hong Kong Free Press Nandika Andriamifidisoa Zo
Sokajy: Azia Atsinanana, Shina, Taiwan (ROC), Fanoherana, Mediam-bahoaka, Tantara, Zavakanto & Kolontsaina, Zon'olombelona
Sary nopihan'i Filip Noubel. Nahazoana alalana.
Nosoratan'i Tom Grundy tao amin'ny Hong Kong Free Press tamin'ny 22 Mey 2019 ny lahatsoratra voalohany. Nivoaka tato amin'ny Global Voices indray izany araka ny fifanarahana fifampizarana votoaty.
Nisy sokitry ny “Tank Man” abontsina goavana hita tao an-drenivohitra Taiwaney, izao antomotry ny faha-30 taona ny fandripahana tao Tiananmen izao.
Hita eo an-tokotanin'ny Tranofitaratra fahatsiarovana an'i Chiang Kai-Shek ao Taipei, ilay artista iray ao an-toerana antsoina hoe Shake no nametraka ireo balaonina ireo. Nilaza  tamin'ny Reuters izy fa manantena an'i Shina ho lasa demaokraty indray andro any:
Koa mihevitra aho fa zava-dehibe ho an'ny vahoaka Taiwaney ny manohy miresaka ity lohahevitra ity – isorohana ny fanadinoan'ny olona ity toe-javatra ity ary hampahatsiahy amin'ny vahoaka Taiwaney fa mampidi-doza io fitondrana ao Shina io… Efa voafafan'ny fijery politika tsirefesimandidi[n'i Shina] io zavatra io.
Nifanandrify tamin'ny fivorian'ny manampahaizana (siantifika) iraisampirenena hotanterahana amin'ny 4 jona 2019 ho avy izao, miaraka amin'ireo lanonam-pahatsiarovana maro amin'ny faran'ny herinandro ao Taiwan ny fivoahan'ity sokitra abontsina ity. Hisy koa ny fanatanterahana fandrehetan-dabozia fiaretan-tory, vakinteny oniversitera ary seminera ho fahatsiarovana ny tingerintaona faha-30.
Voaaro ny fahalalaham-pitenenana ao Taiwan demaokratika, na dia mampihevitra ity nosy ity ho ao anatin'ny zarataniny aza i Beijing.
Tamin'ny taona 2016, nanatontosa fampisehoana tao Adelaide, Aostralia, ilay artista sady mpanao tantara an-tsary Badiucao ho fanomezam-boninahitra an'i “Tank Man.” Taty aoriana izy nanomboka fanentanana handrisihana ny vahoaka hafa manerana izao tontolo izao hanao ny paozin'ilay mpanao fihetsiketsehana manirery .
Fampisehoana Tank Man tao Adelaide tamin'ny taona 2016. Saripika: Badiucao.
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2019/05/29/139276/
 mpanao fihetsiketsehana manirery: https://www.hongkongfp.com/2018/05/25/chinese-artist-calls-people-around-world-pose-tank-man-29th-anniversary-tiananmen-massacre/